Raspberry Pi vs NAS Servers: Ihe niile I Kwesịrị Ịma | Ngwaike efu
Raspberry Pi vs NAS Servers: Ihe niile I Kwesịrị Ịma
Isaac | | Ntu Pi
Ọ bụrụ na ị na-eche jiri sava NAS, mgbe ahụ ị kwesịrị ịma na ị nwere ọtụtụ nhọrọ n'aka gị. Site na iji Raspberry Pi nwere ihe nchekwa, ọ bụrụ kaadị SD n'onwe ya ma ọ bụ ebe nchekwa USB mpụga, ahaziri ka ọ bụrụ ọrụ nchekwa netwọkụ, ruo n'iji ọrụ nchekwa igwe ojii sitere n'aka onye na -eweta ya, dị ka nnabata na -agbanwe agbanwe sitere na Webempresa, site na ngwaike. Ngwọta NAS.
Dị ka a web servidor, Sava NAS ha nwere ike ịba uru n'oge. Ma ọ bụ ịchekwa data ị nwere ike ịnweta site na ebe ọ bụla n'oge ọ bụla, iji ya maka nkwado ndabere ma ọ bụ nnomi ndabere, dị ka nchekwa nke ọtụtụ ihe gị, na ọtụtụ ndị ọzọ. Njupụta dị oke karịa, mana ị kwesịrị ịmụtakwu maka azịza dị ugbu a ka ị nwee ike họrọ nke kacha mma maka mkpa gị ...
1 Gịnị bụ ihe nkesa?
1.1 Otu esi ebuga sava
1.2 Serversdị sava
2 Ndị sava NAS: ihe niile ịchọrọ ịma
2.1 Kedu ihe m nwere ike iji NAS?
2.2 Kedu otu esi ahọrọ sava NAS kacha mma?
3 Raspberry Pi: mma agha ndị agha Switzerland maka ndị na -eme ya
3.1 Uru na ọghọm dị na Raspberry Pi na sava NAS raara onwe ha nye
Gịnị bụ ihe nkesa?
Ọ dị mkpa ịmata kedu ihe bụ sava Yabụ na ị maara na ọ bụghị ha niile nọ na nnukwu ebe data, mana ị nwekwara ike tinye ya na PC gị, na Raspberry Pi gị, yana na ngwaọrụ mkpanaka.
Na kọmputa, ihe nkesa abụghị ihe ọzọ kọmputan'agbanyeghị oke ya na ike ya. Kọmputa a ga -enwe akụkụ dị mkpa nke akụrụngwa ọ bụla, yana sistemụ arụmọrụ na ngwanrọ na -enye ọrụ (ya mere aha ya). Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnwe sava NAS raara onwe ya maka nchekwa netwọkụ, sava weebụ ịnabata ibe, sava nyocha, wdg.
Ihe ọ bụla ọrụ sava ahụ nyere, a ga -enwe ngwaọrụ ndị ọzọ ga -ejikọ na ya iji rite uru na ọrụ ha na -enye (ihe nkesa-onye ahịa). A maara ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka ndị ahịa yana ha nwekwara ike ịbụ site na ama ama, Smart TV, PC, wdg.
Otu esi ebuga sava
Ụdị ihe nkesa nke ndị ahịa bụ echiche dị mfe, nke sava ga na-eche onye ahịa ma ọ bụ ndị ahịa ka ha rịọ arịrịọ. Mana onye nkesa kwuru enwere ike ime ya n'ụzọ dị iche iche:
Nnwekọrịta: na -ezokarị aka na nnabata, ma ọ bụ nnabata web, nke a na -ekerịta. Nke ahụ bụ, ebe a na -akwado ọtụtụ weebụsaịtị yana nke ndị nwe dị iche iche na -enwekarị. Nke ahụ bụ, a na -ekekọrịta akụrụngwa ihe nkesa (RAM, CPU, nchekwa, na bandwidth).
Uru: ha na -adịkarị ọnụ ala mgbe ha na ndị ọzọ na -ekerịta. Ịchọghị ihe ọmụma teknụzụ dị elu, ọ dị mfe ịmalite.
Ọghọm. N'ịbụ ndị ekerịta, uru ya nwere ike ọ gaghị abụ nke kacha mma.
Maka gịnị? Ha nwere ike ịdị mma maka blọọgụ mmalite ma ọ bụ weebụsaịtị nwere ihe na-erughị nleta 30.000 kwa ọnwa. Ọbụnadị maka ọnụ ụzọ obere azụmahịa.
VPS (Mebere Onwe Server): ha na -aghọwanye ewu ewu. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ kọmpụta “kewara ekewa” na sava mebere dị iche iche. Nke ahụ bụ, igwe nkịtị nke a na -ekesa akụrụngwa ya n'etiti ọtụtụ igwe mebere. Nke ahụ na -ahapụ ha n'etiti ndị nkekọrịta na ndị raara onwe ha nye. Nke ahụ bụ, onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnwe sistemụ arụmọrụ maka onwe ha, yana akụrụngwa (vCPU, vRAM, nchekwa, netwọkụ) nke ha agaghị eso onye ọ bụla kerịta, na -enwe ike ijikwa VPS dị ka a ga -asị na ọ bụ nke raara onwe ya nye.
Uru: nye nkwụsi ike na scalability. Ị ga -enwe ohere mgbọrọgwụ na sava ahụ (na nkata gị). Ị nwere ike iwunye ma ọ bụ wepu ngwanrọ ọ bụla ịchọrọ. N'ihe gbasara ọnụ ahịa, ha dị ọnụ ala karịa ndị raara onwe ha nye.
Ọghọm: njikwa, ịmachi na nchekwa ga -abụ ọrụ gị. Ọ bụrụ na nsogbu ebilite, ị ga -edozikwa ya, yabụ ị ga -achọ ihe ọmụma teknụzụ karịa nke ahụ ekekọrịtara. N'agbanyeghị na ọ na -agbanwe agbanwe karịa nkekọrịta, ọ na -aga n'ihu nwere oke ụfọdụ ma e jiri ya tụnyere nke raara onwe ya nye.
Maka gịnị? Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ obere na ndị na-achọ ịnabata weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ha.
Raara onwe ya nye: n'ime ha ị ga -enwe njikwa gburugburu ebe obibi, na -enweghị "ndị agbata obi na -akpasu iwe". Nke ahụ pụtara na ị ga -enwe igwe maka gị, na -enwe ike ijikwa ya otu ịchọrọ ma wuo akụrụngwa ịchọrọ.
Ọghọm. Ha chọrọ nlekọta mgbe niile.
Maka gịnị? Ezigbo maka ngwa weebụ, saịtị eCommerce, yana ọrụ ga -enwe nnukwu okporo ụzọ.
Onwe onwe: ndị gara aga bụ sava niile nke ụlọ ọrụ igwe ojii nyere. Agbanyeghị, ị nwekwara ike ịnwe sava gị. Nke a nwere ike nwee nnukwu uru, ebe ọ bụ na ị ga -abụ onye nwe akụrụngwa, na -eme ka nzuzo na nchekwa nke data gị dị elu. Iji nweta sava nke gị, enwere ike ịme ya, dịka m kwuru na mbụ, na -eji PC ọ bụla, ngwaọrụ mkpanaka, na ọbụna Raspberry Pi. N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị ike karịa nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịzụta sava dị ka nke ndị ụlọ ọrụ nyere dị ka HPE, Dell, Cisco, Lenovo, wdg, iji mepụta "data center" nke gị, n'agbanyeghị oke ...
Uru: ị ga -abụ onye nwe ihe nkesa, yabụ ị ga -enwe njikwa zuru oke. Ọbụlagodi mgbe ị na -enyocha ma ọ bụ na -anọchi ngwa akụrụngwa.
Ọghọm: ị ga -ahụ maka nsogbu niile nwere ike ibilite, nrụzi, ndozi, wdg. Na mgbakwunye, nke a nwere mmụba na ọnụ ahịa, ma ịzụta akụrụngwa na ikikere dị mkpa, yana ọkụ eletrik nke igwe nwere ike ịnwe, na ịkwụ IPS ma ọ bụrụ na ịchọrọ brọdband ngwa ngwa.
Maka gịnị? Ọ nwere ike ịba uru maka otu, ụlọ ọrụ na gọọmentị chọrọ njikwa data niile, ma ọ bụ maka ndị ọrụ chọrọ ịtọlite ​​ihe akọwapụtara nke ọma ma ghara ịhapụ data ha n'aka ndị ọzọ.
Enwere ike variants n'ime ihe ndị a, ọkachasị maka ọrụ na akụrụngwa nke ụfọdụ ndị na -eweta ugbu a na -enye, dị ka ọrụ jisiri ike ka ị ghara ichegbu onwe gị maka ihe ọ bụla, azịza nchekwa, ndị nrụnye dị mfe iji wụnye sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ ngwanrọ na -enweghị ihe ọmụma, wdg.
Na ngalaba nke bu ụzọ, ị nweela ike mata ụzọ esi etinye ihe nkesa, agbanyeghị, enwere ike ịdepụta ha dabere na ụdị ọrụ biiri:
Sava weebụ: Ụdị sava a na -ewu ewu. Ọrụ ya bụ ịnabata ma hazie ibe weebụ ka ndị ahịa, ya na ihe nchọgharị weebụ ma ọ bụ ndị na -awagharị awagharị, nwee ike nweta ha site na usoro iwu dị ka HTTP / HTTPS.
Njikwa sava: ndị a na -eji echekwa data ndị ahịa ka ha nwee ike bulite ma ọ bụ budata na netwọkụ. N'ime sava ndị a enwere ọtụtụ ụdị, dịka sava NAS, sava FTP / SFTP, SMB, NFS, wdg.
Ndị sava email: ọrụ ndị a na -enye bụ iji mejuputa usoro email ka ndị ahịa wee nwee ike ikwurita okwu, nata ma ọ bụ zipu ozi ịntanetị. A na -enweta nke a site na ngwanrọ iji mejuputa usoro iwu dịka SMTP, IMAP, ma ọ bụ POP.
Sava nchekwa dataAgbanyeghị na enwere ike ịdepụta ha n'ime faịlụ, ụdị a na -echekwa ozi n'usoro yana n'usoro n'usoro na nchekwa data. Ụfọdụ ngwanrọ iji mejuputa nchekwa data bụ PostgreSQL, MySQL, MariaDB, wdg.
Ihe nkesa egwuregwu.
Ihe nnọchiteanya proxy: na -eje ozi dị ka nkwukọrịta nkwukọrịta na netwọkụ. Ha na -arụ ọrụ dị ka onye na -anọchite anya ya, enwere ike iji ya nyochaa okporo ụzọ, jikwaa bandwidth, ịkekọrịta ibu, caching, anonymization, wdg.
Ihe nkesa DNS: ebumnobi ya bụ ịnye ọrụ mkpebi ngalaba aha. Nke ahụ bụ, ka ị ghara icheta IP nke sava ịchọrọ ịnweta, ihe na -agwụ ike na -enweghị nghọta, ị ga -eji naanị aha nnabata (ngalaba na TLD), dị ka www.example, es , na sava DNS ga -achọ nchekwa data ya maka IP dabara na aha ngalaba ahụ iji nye ohere.
Sava nyocha: ha na -enye ọrụ maka ịnweta ụfọdụ sistemụ. Ha na -enwekarị nchekwa data nwere nzere nke ndị ahịa yana. Ọmụmaatụ nke a bụ LDAP.
ndị ọzọEnwere ndị ọzọ, na mgbakwunye, ọtụtụ ọrụ nnabata na -enye ngwakọta nke ọtụtụ n'ime ndị a. Dịka ọmụmaatụ, enwere ụlọ na -enye gị ọdụ data, email, wdg.
Ndị sava NAS: ihe niile ịchọrọ ịma
na NAS (sava ​​nchekwa ejikọtara na netwọkụ) ha bụ ngwaọrụ nchekwa ejikọtara na netwọkụ. Site na nke a ị nwere ike ịnwe ụzọ iji kwado data ma nwee ya n'aka gị n'oge ọ bụla. Enwere ike itinye ụdị sava a site na iji sọftụwia n'ọtụtụ igwe, dị ka PC, ngwaọrụ mkpanaka, Raspberry Pi, na -akwụ ụgwọ maka ọrụ nchekwa igwe ojii, yana ịzụrụ NAS nke gị (nke m ga -elekwasị anya na ngalaba a). ).
Ndị sava NAS ndị a ga -enwekwa CPU, RAM, nchekwa (SSD ma ọ bụ HDD), Sistemụ I / O, yana sistemụ arụmọrụ gị. Na mgbakwunye, n'ahịa ị nwere ike ịhụ ụfọdụ lekwasịrị anya na ndị ọrụ ụlọ, yana ndị ọzọ maka gburugburu azụmahịa nwere ikike na arụmọrụ ka ukwuu.
El na-arụ ọrụ nke sava ndị a dị mfe nghọta:
System: Sava NAS nwere ngwaike na sistemụ arụmọrụ nke ga -arụrụ onye ahịa ọrụ niile. Nke ahụ bụ, mgbe onye ahịa kpebiri bulite, hichapụ, ma ọ bụ budata data, ọ ga -elekọta usoro niile dị mkpa iji mee nke a, na -enye onye ahịa ihe ngosi dị mfe.
Nchekwa: ị nwere ike ịchọta ha nwere oghere dị iche iche. N'ime oghere ọ bụla ị nwere ike tinye ebe nchekwa iji gbasaa ike ya, ma ọ bụ HDD ma ọ bụ SSD. Draịvụ ike dakọtara kwekọrọ na nke ndị ị na -eji na PC gị. Agbanyeghị, enwere usoro akọwapụtara maka NAS, dị ka Western Digital Red Series, ma ọ bụ Seagate IronWolf. Ọ bụrụ n'ịchọrọ oke azụmaahịa, ị nwekwara WD Ultrastar na Seagate EXOS.
Red: N'ezie, iji nweta ndị ahịa, ọ ga -ejikọrịrị na netwọkụ. Ma ọ bụ site na eriri Ethernet ma ọ bụ site na teknụzụ ikuku.
Kedu ihe m nwere ike iji NAS?
Inwe sava NAS na -enye gị ohere ịnwe 'igwe ojii' nkeonwe, nke nwere ike nweta nnukwu uru. N'etiti egosi na ngwa Ha bụ:
Dị ka ebe nchekwa netwọkụ: ị nwere ike iji ya chekwaa ihe niile ịchọrọ, dịka ọmụmaatụ, chekwaa foto gị na ngwaọrụ mkpanaka gị, jiri ya dị ka ebe ntanetị nke faịlụ mgbasa ozi, ọrụ Netflix gị dị ka nkwanye ugwu na-akwado ihe nkiri na usoro ọkacha mmasị gị (Plex nwere ike ijikwa nke a. , Kodi,…), Wdg.
Bakup: ị ga -enwe ike idetuo usoro sistemụ gị na NAS gị n'ụzọ dị mfe. N'ụzọ dị otú a, ị ga -enwe nkwado ndabere mgbe niile na mkpịsị aka gị ma ị ga -ekwe nkwa na data gị dị na sava ama ama.
share: ị nwere ike iji ya kerịta ndị enyi na ezinụlọ gị ụdị faịlụ niile, ma ọ bụ onye ọ bụla ịchọrọ. Naanị bulite ihe ịchọrọ ịkekọrịta ma ị nwere ike ịnye ndị ahịa ndị ọzọ ohere ka ha nwee ike nweta ma ọ bụ budata ya.
mba: ị nwekwara ike iji ya dịka onye nnabata weebụ iji chekwaa saịtị gị ebe ahụ. Agbanyeghị, buru n'uche na sava NAS ga -ejedebe na bandwidth netwọkụ gị. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ịnweghị ahịrị ngwa ngwa, yana ndị ọzọ na -abanye NAS, ị ga -ahụ ka arụmọrụ arụmọrụ pụtara. Site na fiber optics nke a na -emewanye nke ọma.
ndị ọzọ: Enwekwara sava NAS nwere ike rụọ ọrụ dị ka sava FTP, ịnabata ọdụ data, na ụfọdụ gụnyere ọrụ maka VPN.
Kedu otu esi ahọrọ sava NAS kacha mma?
Mgbe ịzụrụ sava NAS nke gị, ị kwesịrị ị na -ele ụfọdụ anya njikwa teknụzụ Iji hụ na ịzụrụ ezigbo ihe:
Hardware: Ọ dị mkpa na ị nwere CPU nwere ezigbo arụmọrụ yana ezigbo RAM maka ịdị ngwa ngwa. Kedu ka ọrụ a si dị larịị ga -adabere na nke a, n'agbanyeghị na ihe niile ga -adabere ntakịrị na mkpa gị.
Bays / Nchekwa: attentionaa ntị na ọnụọgụ na ụdị bays (2.5 ″, 3.5 ″,…) nke interface ahụ nwere (SATA, M.2,…). Ụfọdụ sava NAS na -akwado ịwụnye ọtụtụ draịvụ ike iji tụọ ike (1TB, 2TB, 4TB, 8TB, 16TB, 32TB,…). Enwekwara ndị nwere ike ịhazi sistemụ RAID maka iweghachi data. Chetakwa na ọ dị mkpa ịhọrọ maka draịvụ ike NAS, nke ahaziri nke ọma iji kwado ibu na oge dị elu:
Njikọ netwọọkụ: ihe ọzọ ị ga -eburu n'uche iji jikọta sava gị na ndị ahịa n'ụzọ kacha mma.
Sistemụ arụmọrụ na ngwa: onye nrụpụta ọ bụla na -enyekarị sistemụ nke ya, yana usoro ngwa yana ọrụ dị iche iche. Na mkpokọta, otu esi agagharị na menus yana nhọrọ ị nwere na mkpịsị aka gị ga -adabere na ya. Ọdịiche dabere na onye na -eweta ya.
Brandsdị kachasị mma- Ụfọdụ ụdị sava NAS akwadoro nke ọma bụ Synology, QNAP, Western Digital, na Netgear. Ụfọdụ aro ịzụta bụ:
Njikọ Ethernet Western Digital My Cloud Home yana ruo 4TB (maka ụlọ)
Synology DS720 + 2 Bays (maka obere azụmaahịa ma ọ bụ ndị ọrụ na -achọ ihe ka ukwuu)
QNAP 4 Bays na ruo 8 TB (maka ndị ọkachamara)
Raspberry Pi: mma agha ndị agha Switzerland maka ndị na -eme ya
Ngwọta dị ọnụ ala maka sava NAS ma ọ bụrụ na ịnweghị nnukwu mkpa bụ iji SBC gị mejuputa otu n'ime ha. Raspberry Pi na -enye gị ohere ịnwe NAS gị dị ọnụ ala n'ụlọ. Ị ga -achọ naanị:
Otu osisi Raspberry Pi.
Ebe nchekwa (ị nwere ike iji kaadị ebe nchekwa n'onwe ya ma ọ bụ ihe nchekwa USB ejikọrọ na Pi gị. Ọ nwere ike bụrụ draịvụ USB mpụga ma ọ bụ pendrive ...
Ngwanrọ iji mejupụta ọrụ a. Ị nwere ike ịhọrọ site n'ọtụtụ ọrụ, ọbụlagodi isi mmalite, dị ka igwe ojii, NextCloud, wdg.
Uru na ọghọm dị na Raspberry Pi na sava NAS raara onwe ha nye
Ọ bụrụ na ị kpebie inweta uru nke sava NAS, ị kwesịrị ịtụle uru na ọghọm ya nke nwere ike nweta mmejuputa ya site na Raspberry Pi:
Ike dị ala
Ịmụta n'oge usoro nkenye ọnọdụ
Mmachi ịrụ ọrụ
Ihe isi ike na nhazi na ndozi
Ekwesịrị ijikọ ya na netwọkụ yana yana ọkụ (oriri)
Ebe ọ bụghị ngwaọrụ NAS raara onwe ya nye, enwere ike inwe nsogbu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji SBC maka ọrụ ndị ọzọ
En mmechiỌ bụrụ na ịchọrọ ọrụ NAS dị obere ma dịkwa ọnụ ala, Raspberry Pi ga -abụ ezigbo enyi gị ka ị ghara itinye ego buru ibu. N'aka nke ọzọ, maka ọrụ nwere ikike nchekwa, nkwụsi ike, scalability, yana arụmọrụ, mgbe ahụ ọ kacha mma ịzụta sava NAS gị ma ọ bụ were ọrụ nchekwa igwe ojii ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Raspberry Pi vs NAS Servers: Ihe niile I Kwesịrị Ịma
1n4148: ihe niile gbasara diode ebumnobi
Oge ịka nká e mere atụmatụ: nka aghụghọ ka ị wee mekwuo ...